चर्चित हास्य टेलिसिरियल ‘सक्किगोनी’ को यही असोज महिनाको पहिलो साता प्रशारित भाग ३५ मा एउटा आयुर्वेदसँग सम्बन्धित सामग्री देखाइएको छ । सिरियलका एक पात्र ‘पाँडे’ ले काठमाडौँमा ‘पाँडे आयुर्वेदिक फर्मा’ खोल्छन् । जहाँ गाउँबाट बाख्राको बड्कौला र फर्निचर उद्योगबाट काठको धुलो झिकाइन्छ, प्याकेजिङ गरेर बेचेको देखाइन्छ । विस्तृतमा
आखिर के हो त भारत–पाकिस्तानबीचको विवाद, यस्तो छ नालीबेली ?
एजेन्सी । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का दुई आणविक राष्ट्र भारत र पाकिस्तानबीच काश्मीरी सीमा क्षेत्रलाई लिएर विवाद हुनुलाई
‘विकास भनेकै बाटो’
नारायणपुर । दाङकै विकट गाउँपालिका बंगलाचुली २ टाकुराका स्थानीयवासीलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु बजारबाट बोकेरै ल्याउनुपथ्र्यो । गाउँका बिरामीलाई समेत बोकेर ल्याउने लैजाने गर्नुपर्ने समस्याबाट पीडित थिए टाकुरावासी । तर, स्थानीय सरकार गठन भएपछि पहिलो प्राथमिकता सडक निर्माणले पायो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियासँगको आगामी बैठकप्रति आशावादी रहेको बताउँदै गत बुधबार भन्नुभयो– आगामी हप्ता भियतनामको हनोइमा हुन लागेको उत्तर कोरियाली नेतासँगको बैठकप्रति म निकै आशावादी छु, मलाई लाग्छ त्यहाँ जे हुन्छ त्यो सबैका लागि फलदायी नै हुनेछ ।
आलेखः ‘सतखलुवा’को सुन्दरतामा लोभिँदै पर्यटक
बाँके । अघिल्तिर घना जङ्गल छ । पछिल्तिर पहाडी र थारूहरूको बाक्लो बस्ती छ । जङ्गलसँगै सटेको सतखलुवा ताल, तालको पूर्वतिर ग्याङ्ग र पश्चिममा भादा खोला छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको बैदीचोकबाट साढे तीन किलोमिटर उत्तर लागेपछि सतखलुवा ताल पर्छ ।
‘अमेरिकाले भने जस्तो नहुँदा भेनेजुयलाको यो दुर्गती’
काठमाडौँ । विश्वमा सानो संख्यामा रहेका समाजवादी दाबी गर्ने मुलुकहरुमध्ये भेनेजुएला पनि एक हो । प्राकृतिक श्रोत साधनमा अत्यन्त धनी भएपनि राजनीतिक कारणले आर्थिक अस्थिरता र आर्थिक अस्थिरताले गरिबीको चपेटामा परिरहेको छ । भेनेजुएलाका लागि त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधन र राजनीतिक प्रणाली नै मुख्य अभिशाप भएको छ । कतिपय विश्लेषकहरु यतिखेरको भेनेजुएला सङ्कट यसै कारणले सिर्जना हुन पुगेको बताउने गर्छन् ।
अस्ट्रेलियामा राजदुत लक्की प्रकरण र नेपाली कुटनीतिक क्षेत्रका लागि पाठ
हुन त राजदुत सह–सचिव स्तरको नियुक्ति हो । तर, यो मन्त्री परिषद्बाट नभई मन्त्री परिषदको सिफारिशमा राष्ट्र प्रमुखबाट नियुक्त हुने पद हो । अझ सार्वभौम संसदको सुनुवाई समितिबाट हुने प्रश्नोत्तर समेत पार गरी नियुक्त भएर जाने राष्ट्रबाट अग्रिमो आएपछि मात्र राजदूत नियुक्त हुन्छन् ।
नाइजेरियाली महिलाहरु परिवार नियोजनप्रति आकर्षित
मोडुपे आडेगबिटेका हजुरबाबुका २२ सन्तान थिए । उनका बुबाका ९ जना मात्र सन्तान जन्मिए । उन्नाइस वर्षीया मोडुपेले भने चार जनाभन्दा बढी सन्तान नजन्माउने निर्णय गरेकी छिन् ।
के छ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा ?
काठमाडौँ । बहुचर्चित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ लामो कसरतपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ । अब राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि कानूनको रुपधारण गर्नेछ । यही माघ ११ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि ऐन बन्ने प्रायः निश्चित भएको छ । तर प्रा डा गोविन्द केसीको मागअनुसार यो विधेयक संसद्मा प्रवेश गरे पनि केसीको अनशन भने अझै समाप्त भएको छैन ।
काठमाण्डौ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा कुनै परिवार तथा बंशको वरीपरी शासन व्यवस्था केन्द्रित हुनु अस्विभाविक मानिनु पर्ने हो । विश्व राजनीतिलाई सैद्धान्तिक रुपमा व्याख्या गर्नेहरुको परिभाषामा रक्त सम्बन्ध वा वंशगत सम्बन्धबाट उत्तराधिकारी बन्ने र बनाउने राजनीतिले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तलाई मिचेको निष्कर्ष निकाल्छन् ।